မုန်နှင့်သုပ် | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: appetizers နှင့်ဟင်းရွက်သုတ်
ဝက်သားအရေပြားလိပ် - ဘီယာမုန့်
အပေါ် Posted 22.04.2021 22.04.2021
မင်းဘီယာအတွက်အရသာရှိပေမယ့်သိပ်ပြီးကယ်လိုရီသိပ်မပြင်းဘူးလား? ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိပ်ကြီးများ! ထိုကဲ့သို့သောသင်၏ guests ည့်သည်များ, သူတို့သည်အခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်သကဲ့သို့။
ဖေဖော်ဝါရီလ 23-mu နေဖြင့်အာလူးပိုင်နှင့်အတူ puff သုပ် "စတား"
အပေါ် Posted 18.02.2019 18.02.2019
သင်၏လူကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင်ပျော်မွေ့ပါစေ။ - အရည်ရွှမ်းထားသောဒိန်ခဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လူတိုင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အာလူးကြော်အခွံ၏ကြည်လင်ပြတ်သားသောအခြေနေသည်အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သုပ် "သံတမန်": မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရသာရှိတဲ့
အပေါ် Posted 16.02.2019 16.02.2019
တစ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးပါကသင်ဒီသံတမန်သုပ်ကိုအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဖြစ်စေမကြာခဏပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးထုတ်ကုန်များမှသင့်အိမ်သူအိမ်သားများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာမည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအားရစရာတစ်ခုထွက်လာသည်။
တစ်ဦးအောင်ပွဲခံစားပွဲပေါ် sprats နှင့်ကီဝီနှင့်အတူအသားညှပ်ပေါင် - 15 မိနစ်ပြင်ဆင်နေ
အပေါ် Posted 24.11.2018 24.11.2018
Kiwi၊ ပန်းသီးနှင့်အမှုန့်များ - သင်ဟာသားညှပ်ပေါင်မုန့်စာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တာကိုသင်အံ့အားသင့်မှာပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအားလပ်ရက်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာရှိကြောင်းသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သူတို့၌ထူးခြားသောလက္ခဏာရှိသော်လည်း၊
ငရုတ်ကောင်းနှင့်သံလွင်သီးနှင့်အတူဆား herring ၏ Rolls - ပထမအရပ်ဌာန၌ဧည့်သည်များ
အပေါ် Posted 23.11.2018 23.11.2018
သင်၏ guests ည့်သည်များအားမည်သို့အံ့အားသင့်စေမည်နည်း။ ဘယ်ချက်ပြုတ်လိပ်စာလဲ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်အသွေးစုံလင်။ အရသာရှိသောမုန့်တစ်မျိုးကိုပြင်ဆင်လျှင်ရုရှား herring သည်နှစ်သစ်ကူးစားပွဲ၏မိဖုရားဖြစ်လာနိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှရှုပ်ထွေး, သင် ...
2019 ခရစ္စမတ် menu ကို: တူနာငါးနှင့်အတူသုပ် "ပင်လယ် Rhapsody" - စာရွက်
နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သည်သုပ်များဖြင့်စတင်သည်။ ဤအချိန်များစွာသောလူများမှာဤအချိန်တွင်တတ်နိုင်သမျှစားပွဲပေါ်တင်ပါစေ။ အစဉ်အလာနှစ်သစ်ကူး Olivier အပြင်အခြားသူများကိုလည်းပြင်ဆင်ပါ။ တချို့ကငါးနဲ့ဖြစ်ရမယ်
လိမ္မော်ရောင်ငံပြာရည်နှင့်အတူပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်အတူ Menu ကို Slim သုပ် - စာရွက်
အပေါ် Posted 17.11.2018
ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ဘာစားရမယ်၊ ပါးလွှာသောပုံရိပ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ထာဝရပြproblemနာ ကံကောင်းထောက်မစွာကိုယ်အလေးချိန်ကျသူအားလုံးအတွက်ကယ်လိုရီနည်းပါးသော်လည်းအာဟာရပြည့်ဝသည်။
Mayonnaise မပါဘဲသုပ် - ကအရသာပြီးလွယ်ကူသည်!
အပေါ် Posted 03.11.2018
mayonnaise ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲအရသာသုပ်အောင်ဘယ်လို? လူများစွာသည်ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်မဖြစ်နိုင်ဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုကြလိမ့်မည်။ အသုပ်များ ၀ တ်ဆင်ရန်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးထုတ်ကုန်မှာ Mayonnaise ဖြစ်သဖြင့်အစားထိုးမရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Ratatouille casserole သုပ် - အမြန်စာရွက်
"Ratatouille" (လျှောက်လွှာ - Provence, Cote d'Azur) ချက်ပြုတ်သည့်အချိန် Ratatouille - မိနစ် ၃၀ ။ ချက်ပြုတ်ချိန် - ၄၅ မိနစ်။ ပါဝင်သူ (ခြောက်ယောက်အတွက်): ခရမ်းချဉ်သီး - ၅၀၀ ဂ။ Zucchini - 30 ဂရမ်။ သံလွင်ဆီ -…
သုပ်အတွက်မုန်လာဥနီကိုဘယ်လောက်ကြာချက်ပြုတ်သင့်သလဲ ဓားဖြင့်ထိုးဖောက် ... အလွယ်တကူအဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ပိုမိုကြာရှည်စွာချက်ပြုတ်နိုင်လျှင်ပါဝါအပြည့်ဖြင့် ၇ မိနစ်မိုက်ကရိုဝေ့တွင်ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်သည်။ သင်ကဓားဖြင့်အခါအားလျော်စွာထိုးဖောက်ရန်လိုအပ်သည်။ နူးညံ့တယ်ဆိုရင်အဆင်သင့်ဖြစ်မယ်။
ထုတ်လုပ်ခြင်းအနီရောင် caviar ၏အဘယ်အရာကိုတစ်လအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း
အနီရောင် caviar အတွက်ထုတ်လုပ်မှုအကောင်းဆုံးလကဘာလဲ။ တကယ်တော့အနီရောင် caviar ကိုစက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာလမှာထုတ်လုပ်တဲ့နေ့ကိုဝယ်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကာလအတွင်း ...
ပန်းသီးကိုဘယ်လိုစိုစွတ်ရမလဲ။ ဆားရည်အိုင်: ရေ၏ 10 လီတာအတွက်သကြား2ခွက်, ဒါမှမဟုတ် mda, ဆား3ဇွန်း, ကောက်ဂျုံ 200 ဂရမ်။ ဂျုံမှုန့်ကိုပြုတ်ပြီးရေတွင်ထည့်ပါ၊ ပန်းသီးများကိုကောက်ရိုးသို့ပြောင်းပါ။
ညစာအတွက်အရသာရှိတဲ့ချစ်မြတ်နိုးရသူကိုဘာချက်ပြုတ်ရမလဲ။ ကြည့်ရှုပါ၊ မတူကွဲပြားသောဟင်းပွဲများစွာရှိသည်။ သင့်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ http://otvet.mail.ru/answer/299656874/ http://otvet.mail.ru/answer/302286852/ http: // otvet ။ mail.ru/answer/296537452/ http://otvet.mail.ru/answer/296535133/ အာလူးပါ ၀ င်သည့်ပြင်သစ်ပုံစံအသား၊ ဝက်သို့မဟုတ်အမဲသား ၁ ကီလိုဂရမ် ...
vinegreda များအတွက်အာလူး, မုန်လာဥ, beets ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
vinaigrette များအတွက်အာလူး, မုန်လာဥ, beets ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်? အဆင်သင့်မဖြစ်မှီ ပျော့ပျောင်းဖြစ်လာဖို့။ တစ်ခုခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်မရှိပါကယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ ))) beets နှင့်မုန်လာဥနီကိုအတူတကွချက်ပြုတ်ပါ။ အာလူးသီးခြားစီ။
ပင်လယ်ရေမှော်အကျိုးကျေးဇူးများကဘာတွေလဲ။ ပင်လယ်ရေမှော်များ၏အသုံး ၀ င်သောဂုဏ်သတ္တိများပင်လယ်ရေမှော်ကိုစားခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပစ္စည်းများ၊ သွေးခဲစေခြင်း၊
အာလူးကြော်နဲ့တူ crunched သောကြက်သွန်ကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အတွက်ရှင်းလင်းချက်
ချစ်ပ်များကဲ့သို့ crunch ရန်ကြက်သွန်နီကြော်ဖို့ဘယ်လို? နက်ရှိုင်းသော - ကြော်အတွင်းပိုင်းရှင်းလင်းချက်! ကြက်သွန်ကြော်လက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ၁၅၀ ဂရမ်ကြက်သွန်နီ ၁/၄ ခွက်ဂျုံမှုန့်အရသာအတွက်အရသာအဘိတ် - ကြက်သွန်အခွံကိုသုတ်ခြင်း၊
ရေနှင့်ဂျုံမှုန့်မှမုန့်စိမ်းပြုလုပ်နိုင်သလော။ သင်ဆားထည့်ရန်မမေ့ပါနှင့် ... ဒါကခေါက်ဆွဲကိုသွားလိမ့်မယ် ... ဒါပေမယ့်ကြက်ဥတစ်လုံးနဲ့အတူပိုကောင်းနေသေးသည်))) သင်ဟာဥမပါဘဲမလုပ်နိုင်ပါ။
အဘယ်အရာကိုစမုန်နက်မှလုပ်နိုင်သနည်း စမုန်နက် casserole - စမုန်နက် - 500g - ခရမ်းချဉ်သီး (ကြီးမား) -3PCs ။ - ကြက်သွန် - 1 pc ။ - ဘေကွန် - 50 ဂ - မာဂျ - -
မှိုနှင့်အတူအမဲသား၏ prompt သုပ်
မှိုနှင့်အတူအမဲသားတစ်သုပ်ပြောပြပါ။ မှိုများနှင့်အတူအသားအသုပ်မှို 250 ဂရမ်, နွားငယ်သား 300 ဂရမ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက် 1 ဂရမ်, 1 ကြက်သွန်, XNUMX tbsp ။ ဌ။ သံပုရာဖျော်ရည်, ငရုတ်ကောင်း, ဆား။ ပြင်ဆင်ထားသော champignons များကိုအချပ်များ၊
အိမ်မှာဒိန်ခဲ kremette ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အိမ်မှာ Cremette ဒိန်ခဲလုပ်နည်း Philadelphia တွင်ဒိန်ခဲပြုလုပ်ရန်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောနိုင်တာကသဘာဝမုန့်ရှာတာအဓိကအခက်အခဲက UHT မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းပြီ…
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 17 Next ကို 's Page
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,801 စက္ကန့်ကျော် Generate ။